Global Voices teny Malagasy » Hitan’ny Mpikatroka ny Mahareniranontay Ny Reniranon’i St. Petersburg · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Novambra 2014 3:36 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Naomy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Tontolo_iainana, Akon'ny RuNet
Ny fofona misiterin'ny rano azo andehanan-dakana ao St. Petersburg. Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Misy ranontay manavatsava an'i St-Petersburg. Miainga ao amina tanàna kely antsoina hoe Novoye Devyatkino izany ary mipaka ao Neva, izay mitobaka ao amin'ny helo-dranomasina Neva sy any amin'ny Helodranon'i Finlandy avy eo. Efa nisy fotoana ireo mponina ao an-toerana no manana ahiahy amin'ny rano azo isosan-dakana ao Novoye Devyatkino, saingy nisy vondrona mpiaro ny tontolo iainana iray nilaza ankehitriny fa manana ny porofon'ny fanavatsavan'ny dikin'olombelona an'i St. Petersburg tsy misy fanivanana.
Roa herinandro lasa izay, nanatontosa fitsapana tao Novoye Devyatkino, zana-tanàna miala 20 kilaometatra ny tanàndehibe, tamin'ny rafi-panadiovana [tatatra] ao an-toerana ny vondrona mpiaro tontolo iainana iray ao St-Petersburg. Tamin'ny fikarohana nomen'izy ireo anarana hoe “Zotran-Diky ” ry zareo no nandatsaka fitaovana sivy nohakelezina ho fanarahana amin'ny alalan'ny GPS  sy tsy mety lenan'ny rano ao anaty tranom-pivoahan'ny fonenana iray ary nanomboka nandrakitra an-tsarintany ny marika nizoran'ireo fitaovana. Nilaza ireo mpitandro ny tontolo iainana tao amin'ny tranonkalan'izy ireo fa niraraka mivantana avy tao an-trano ka nanaraka ny lalandrano azo izoran-dakana an-kalamanjakana, tsy mba nisedra akory ny bitika indrindra amin'ny fanivanan'ny tatitra fanarian-drano ireo fitaovana naraha-maso. Hatrao Novoye Devyatkino, dimy amin'ireo fitaovana no nahatratra ny rano midadasiky ny helodranon'i Neva, izay toerana nahafatesan'ireo vatoaratra tamin'ny fitaovana.
Sarintanin'ny lalàn'ireo GPS natao hitsongoana dia. Tao amin'ny koprotravel.info.
Nisalasala tamin'ny voka-pikarohan'ireo mpitandro ny tontolo iainana ny sasany tamin'ireo mpiserasera, tsy mino izy ireo fa afaka mamoaka famantarana avy any ambanin'ny tany ireo fitaovana GPS ireo. Maro tamin'ireo fisalasalana no nifototra tamin'ny tsy fahafantarana fa nanaraka fitaovana tamin'ny GPS amin'ny tatatra ireo mpitandro ny tontolo iainana ireo. Nilaza anefa ireo tao ambadiky ny fitsapana, fa ireo fitaovana fitsongoan-dia azy ireo – miaraka amin'ny zavatra hafa rehetra mety ariana avy hatrany ao amin'ny lava-piringa ao Novoye Devyatkino – dia tsy nandeha lalana ambanin'ny tany mihitsy any amin'ny tatatra ireo fitaovana ireo, tonga dia nivantana avy hatrany tany amin'ny lalandrano tao ivelany tsy nisy nanakatsakana na dia harato iray aza.
[Embed] https://www.youtube.com/watch?v=F-gYahJlb18#t=30 [/ embed]
Na dia izany aza, dia mbola misy ny fanontaniana nivoaka momba ilay fanandramana. Tamin'ny 29 Oktobra, namoaka lahatsary manazava ny fikarohana nataony ireo mpitandro ny tontolo iainana, lahatsary ahitana vehivavy milaza fa Evgenia Dolgova no anarany. Ao amin'ny lahatsary, mampiseho zavatra bitika toy ny gaoma i Dolgova raha nanazava ny fampiasana ireo fitaovana hanarahana amin'ny alalan'ny GPS (jereo ny sary eto ambany). Mampiseho sary vitsy misy ireo karazana fanarahamaso amin'ny GPS karazany roa tsy mety lenan'ny rano ny lahatsary: ireo no TKSTAR LK109  sy Twin Mask MT-90 .
Evgenia Dolgova mampiseho ny iray amin'ireo GPS voalaza fa nampiasaina tamin'ny “Zotran'ny Diky.”
Maharitra 160 ora ny fahaveloman'ny vatoaratra amin'ireo fitaovana ireo, izay ahafahana mandray marika ao anatin'ny herinandro, saingy eo amin'ny 10 cm² eo ho eo ny velaran'ny tavan'ny fitaovana iray, ka mahasarotra ny hino fa ny iray na ireo GPS karazany roa ireo no teo am-pelatanan'i Dolgova tao amin'ny lahatsary YouTube.
Tamin'ny 17 Novambra, taorian'ny fandrenesana ny fitsapana tao Novoye Devyatkino, dia nanomboka nandefa fitarainana tao amin'ny pejy habaky ny orinasan'ny herinaratra ao an-toerana ireo mponina sasany tao amin'ny faritra, nampiakatra sary misy ny faktioran-dry zareo ary nanao boribory tamin'ny penina mena ny vola nalòa 200 robla (eo amin'ny 4 dolara eo ho eo) amin'ny asam-panadiovana amin'ny alalan'ny tatatra. Ahitana rohy momba ireo fitarainana ireo ny habak’ ireo mpitandro ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao, habaka izay nisiana fahatapahana vonjimaika izay nanondroan'izy ireo ny asan'ny piraty ho niteraka izany toe-javatra izany.
Vaovao Farany (18 Novambra 2014): afaka nifandray tamin'ireo mpitandro ny tontolo iainana nanao ny fikarohana ny RuNet Echo, ary fantatray tamin'izany fa ny GPS nampiasan'izy ireo dia tsy mitovy amin'ireo fitaovana naseho tamin'ny lahatsary YouTube-n'izy ireo. Araka ny filazan'ny vondrona, nanamboatra ny singa GPS / GLONASS vita Shinoa azy ireo manokana izy ireo, izay napetrak'izy ireo tanaty barika tsy tantera-drano. Feno enton-drano madinika mahatonga ireo barika tsirairay avy ireo hitsingevana ireo fitaovana. Norakofana fangaron-tsira ihany koa ny fitaovana GPS tsirairay avy, izay nahafahan'ireo fitaovana ireo hilentika amin'ny voalohany. Rehefa levona izany fangaro izany, dia mitsingevana indray ireo GPS, ka afa-mandefa famantarana. Nilaza ireo mpiaro ny tontolo iainana fa natao hitsitsy vatoaratra ny GPS nampiasaina, mandefa famantarana tokana isaky ny adiny iray, izay midika fa nifototra tamin'ny fanombatombanana fotsiny ny sasany tamin'ireo lalana nasehoan'ny sarintany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/11/23/65880/
 fitaovana sivy nohakelezina ho fanarahana amin'ny alalan'ny GPS: http://www.kp.ru/daily/26308/3186725/
 fisalasalana : http://www.yaplakal.com/forum1/topic965745.html
 nandefa fitarainana : http://ochta-service.info/viewtopic.php?f=12&t=148